kolikolymadagasikara Archives - Book News Madagascar
Papa Fransoa – Nanamafy ny ady amin’ny kolikoly
Nifarana omaly ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara. Naharitra telo andro izany fitsidihana izany, ary nanamarika izany ny lamesa lehibe teny Soamandrakizay, omaly. Ady amin’ny kolikoly Nifarana omaly ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara. Fitsidihana izay naharitra telo andro. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana lehibe niarahana tamin’ny mpino Read more…